သာသနာဖျက် ဂတုံးတွေကျယ်ပြန်.လာလေလေ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် အန္တရာယ်များလေပါဘဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« 88 Student Leader Hla Myo Naung expresses his view on current affair (13-1-2012) ၈၈ တွေ ထောင်ကလွတ်တဲ့အချိန် မီဒီယာတွေကို အင်တာဗျူး တဲ့ အထဲမှာ ကိုလှမျိုးနောင် ပြောခဲ့တာ
လူထုက ပွဲသ်ိမ်းနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ လမ်းပေါ်ကို ထွက်ချင် နေကြ၊ ထွက်စ ပြုနေကြပြီ »
သာသနာဖျက် ဂတုံးတွေကျယ်ပြန်.လာလေလေ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် အန္တရာယ်များလေပါဘဲ
ကို ထင် ကိုယ်ဘာကောင်လဲဆိုတာ ကိုယ်သိဖို.လိုတယ် သို.တည်းမဟုတ် Know Thou Self
အခါတပါးက ကျေးဇူးတော်ရှင် ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ.တူတော်တဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါးက ရပ်ထဲရွာထဲသွားဖို.သင်္ကန်းရုံနေတာမြင်တော့ ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီးက
“ဟဲ့ နင်ဘယ်သွားမလို.တုန်း” လို.မေးပါသတဲ့။ ဦးဇင်းကလည်း
“သီလပေးပင့်ထားလို. သွားမလို.ပါဘုရား” လို.ပြန်လျှောက်ပါသတဲ့။ ဒီအခါမှာ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက “သူများပေးဖို. နင့်မှာရော သီလရှိရဲ.လား” လို.မေးပြီးကြွသွားပါသတဲ့။ ဒီအခါမှာ အဲဒီဦးဇင်းလည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ပြန်ဆင်ခြင်ပြီး မစင်ကြယ်တဲ့အဖြစ်ကို ကိုယ်တိုင်သိလာရတာကြောင့် လူဝတ်လဲသွားပါသတဲ့။
စာရေးဆရာထင်လင်းဦးကို ကံဆောင်မယ်လို.ဆော်သြဦးစီးသူက အဓိကရုဏ်းတွေဖြစ်အောင်လှုံ.ဆော်၊ ဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်စေ၊ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေပျက်စီးပြီး ငှက်ပျောသီးတရား၊ ခြင်ထောင်တရား၊ အလှည့်ကျတရား၊ ဖင်ပေါက်စောင့်တရားတွေဟောပြောနေတဲ့၊ ပြည်တွင်းမုဒိမ်းမှုဝါသနာရှင် ဂတုံးဖြစ်နေပါရောဗျာ။ အံ့သြစရာဘဲ။
ကံဆောင်ဖို.ဆိုတာခဏထားလို. ကိုယ်တိုင်ရဟန်းဖြစ်သေးတယ် မဖြစ်တော့ဘူး ကိုယ့်ဖာသာအရင် ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ် ဂတုံးရယ်။ အစကတည်းကိုက ထောက်လှမ်းရေးကထိုးထည့်လို. ရဟန်းကိုမဟုတ်တာလား၊ ဒါမှမဟုတ် ထောင်ထဲမှဖင်ချခံလိုက်ရလို. ပါရာဇိကကျသွားတာလား၊ လူသတ်မီးရှို.တရားတွေဟောလို. ရဟန်းအဖြစ်ကလျှောသွားတာလား ဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာသိသင့်တဲ့အချိန်ရောက်ရုံမက လွန်တောင်လွန်နေခဲ့ပါပြီ။
သာသနာဖျက် ဂတုံးတွေကျယ်ပြန်.လာလေလေ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် အန္တရာယ်များလေပါဘဲ။ ။
This entry was posted on November 30, 2014 at 6:23 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.